ကွန်ပြူတာ တွင် BSD (Blue Screen of Death) တက်ရခြင်း အကြောင်း ၁၀ ရပ် | IT Sharing Network
ကွန်ပြူတာ တွင် BSD (Blue Screen of Death) တက်ရခြင်း အကြောင်း ၁၀ ရပ်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မေးထားလို့ လေ့လာဖို့ကူးယူသိမ်းထားတဲ့ အထဲက ပြန်ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ... ဘယ်ဆိုက်က ကူးထားမိမှန်းလည်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး မူရင်းရေးသားထားတဲ့ သူငယ်ချင်း နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်.... ကျွန်တော် ကူးယူထားတဲ့အတိုင်းကတော့... ခင်ဗျားတို့ ကွန်ပြူတာ သုံးနေရင်း တန်းလန်းနဲ့ ရုတ်တရပ်ကြီး hang သွားပြီး အပြာရောင် နောက်ခံနဲ့ “Fatal error: the system has become unstable or is busy,” it says. “Enter to return to Windows or press Control-Alt-Delete to restart your computer. If you do this you will lose any unsaved information in all open applications. အဲဒီ စာသား မျိုးတွေပေါ်တာကို window သုံးတဲ့ သူတိုင်းတွေ့ ဖူးမှာ ပါ။ အခု အဲဒီ Blue Screen တက်လာရင် ဘာတွေကိုစစ်ဆေးရမယ် အဲဒါထက်အရေးကြီးတာက မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ် ရမလဲ ဆိုတာ ပြန်ဝေမျှပါ့မယ်။
1. Hardware Confilct
အပြာရောင်စကရင် တက်ရခြင်း ရဲ့နံပတ် တစ် အဓိက အကြောင်းရင်းခံကတော့ Hardware တွေကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ မှာ တက်ထားတဲ့ Hardware တစ်ခု ချင်းစီတိုင်းက တခြား Hardware တွေနဲ့IRQ(Interrupt Request Channel) ဆို တာနဲ့ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ Hardware တခုစီတိုင်းအတွက် IRQ တစ်ခု ပုံသေ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ ပရင်တာ က IRQ7အနေ နဲ့ ပုံသေ ရှိပြီး Keyboard ကတော့ IRQ 1 စသဖြင့်ပေါ့။ တကယ်လို ခင်ဗျား ရဲ့ ကွန်ပြူတာ မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Devices တွေ များနေခဲ့မယ် ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ Devices တွေက Install ကျကျ နန မလုပ်ထားဘူး ဆိုရင် Devices တွေက IRQ တစ်ခု ထဲကို မျှပြီး သုံး တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အခါမျိုး မှာ ခင်ဗျားကလဲ အဲဒီ Devices ၂ ခု လောက်ကို တစ်ပြိုင်ထဲ သုံးမိမယ်ဆိုရင် Interrupt request တွေ Crach ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကို့ ကွန်ပြူတာ မှာ Hardware Conflict ရှိမရှိ စစ်ဆေးတဲ့နည်းက တော့ Start-Control Panel-System-Devicemanager ဒါမှမဟုတ် RUN box ထဲမှာ devmgmt.msc ရိုက်ပြီး run ခိုင်းရင် Device manager ထဲကို ရောက်ပါမယ်။ အဲဒီ မှာ ပြဿနာရှိနေတဲ့ Device ဆိုရင် အ၀ါရောင် exclamation mark လေးနဲ့ ပြတတ်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးပေါ်နေရင်တော့ အဲဒီ Device နေရာကို right click နှိပ် ပြီး properties မှာ IRQ နံပတ်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့IRQ နံပတ် က တခြား Devices တွေနဲ့ တူနေမယ်ဆိုရင် အဲဒီမှာ ပြဿနာပါပဲး)။ အဲဒါကို ရှင်းတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းက တော့ devices ကို uninstall လုပ်ပြီး install ပြန်လုပ်တာပါပဲ။ Devices ရဲ့ Driver ကို ရှာဖို့ က တော့ www.driverguide.com မှာ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ပြဿနာ ဖြစ်နေတဲ့ Device ဟာ Sound Card တို့ PCI Modem တို့ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တော့ motherboard ပေါ်မှာ တပ်ထားတဲ့ Slot ကိုပြောင်းပေး ခြင်းဖြင့်လဲ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကတော့ warranty rules တွေနဲ့ ငြိ နိုင်တဲ့ အတွက် စဉ်းစားပြီးမှ လုပ်စေချင်ပါတယ်။
RAM ( Random- Access Memory) တွေကလဲ Fatal Error (BSD) တက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းထဲမှာ ပါပါတယ်။ မမ်မိုရီ ကြောင့်ဖြစ်၇တဲ့အကြောင်းမှာ တော့ chips မတူ Frequency မတူ တဲ့ RAM ၂ ချောင်းကို တူတူ တွဲပြီး တတ်ဆင်ထားတာကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်။ ဥပမာ 70ns ရှိတဲ့ RAm နဲ့60ns ရှိတဲ့ RAM ကို တူတူ တွဲထားသလို ပေါ့။
3. BIOS setting
motherboard တိုင်းက သူ့ ရဲ့chipset range ကို စက်ရုံမှာ ထဲက သတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် အဲဒီ ဆက်တင် ကို သွားကြည့် ချင်ရင် စက်စစ တက်ခြင်း မှာ F2 ဒါမှမဟုတ် Delete key နဲ့ ဝင်ကြည့်လို့ ၇ပါတယ် တစ်ချို့laptop တွေ မှာတော့ F10 နဲ့ ဝင်ရတာတွေ့ ဖူးပါတယ်။ IOS ထဲက ၀င်ပြီး ဆိုရင်တော့ သတိထား ဖို့ လို ပါမယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းက တော့စာရွက် အလွတ်တရွတ်ကို ယူပြီး အဲဒီက ဆက်တင်တွေ အကုန်လုံးကို ရေးချထားလိုက်ပါ။ ဒါမှ ကို က တစ်ခုခု ပြောင်းလိုက်လို့ကွန်ပြူတာ က သုံးလို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ဘာပြန်ပြောင်းရမလဲ အလွယ်တကူ သိအောင်ပါ။
ခင်ဗျား ရဲ့ Hard Drive ထဲမှာ Data တွေ အလွန်တရာပြည့်ကျပ်နေမယ် ဆိုရင်လဲ Freeze Screen တွေဖြစ်ပြီး BSD ပါတက်နိုင်ပါတယ်။ ကို့ Hard drive ကို ဖြစ်နိုင်ရင် တပတ်တစ်ခါလောက် Defrag လုပ်ချင်း TEMP ဖိုင်တွေ ရှင်းခြင်း internet cookies တွေရှင်းခြင်း ဖြင့်လဲ သန့် အောင် ထားရပါမယ်။
ဒီ error ကတော့ Video Card ကြောင့်ဖြစ်တာပါ အဲဒါမျိးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ Desktop ပေါ်မှာ Right click-Properties or Control panel-Display ကို သွားပြီး Display setting ကိုချိန်ညှိုကြည့် ပါ။
ဟုတ်ပါတယ် အကောင် ပါ ကွန်ပြူတာ သုံးတဲ့သူတွေကို အမြဲ ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အကောင်ပါ။ တစ်ချို့ Virus တွေက harddrive က boot sector တွေကို ပါဖျက် ပစ်တတ်ပါတယ် အဲဒီလို အဖြစ်ခံ၇ပြီးတဲ့နောက်မှာ OS က တက်မလို နဲ့ BSD ပေါ်တာတွေ တွေ့ ဖူးကြမှာ ပါ။ ကာကွယ် ဖို့ နည်း ကတော့း) အဟဲ အန်တီဗိုင်းရပ်စ် ကောင်းကောင်းသာ ရှာထည့်ထားပေါ့ဗျား)
ပရင်တာတွေမှာ က Buffer memory ပါတယ် ဆိုပေမဲ့နဲတာတွေလဲရှိတယ်လေ။ တကယ် လို့အစုလိုက် အပြုံ လိုက် ပရင့် ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ CPU power ကိုပါစားနိုင်ပါတယ်။ ပရင်တာကနေတစ်ဆင့် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့character တွေ ပရင့်တော့ မယ်ဆိုရင်လဲ BSD တက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကြ ရင် တော့ printer cable တွေကို ခဏဖြုတ် printer ကို default setting ထားပြီး reboot လုပ်ခြင်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
စနစ်တကျ install မလုပ်ထား တဲ့ software တွေက နေ လဲ BSD ဖြစ်နိုင်ပြီး System Crash ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီပြဿ နာကိုရှင်းဖို့ ကတော့ REGCLEANER လို software မျိုး နဲ့ registry file တွေကို default လုပ်ခြင်း repair လုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
9. Over Heating
ခင်ဗျား ရဲ့ ကွန်ပြူတာ က Cooling System မှန်ကန် စွာမတပ်ထားဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် mother board ထဲမှာ ဖုန်တွေတက်နေတယ်ဆိုရင်လဲ CPU မှ Overheated ဖြစ်ပြီး System Crash ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီ အဆင့်ကတော့ CPU ကိုဖြုတ်ပြီး သန့် စင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကို့ ကို ကို စိတ်မချရင် တော့ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်လက်ထဲ ကို သာ အပ်လိုက်တာ အဆင်ပိုပြေမှာ ပါ။
ကို့ ရဲ့ စက်မှာ တပ်ထားတဲ့ Hardware တွေရဲ့ power requirement နဲ့ ကို့ စက်မှာ ရှိတဲ့ power supply ရဲ့support လုပ်နိုင်တဲ့ အား မတူညီခဲ့၇င် လဲ System Crash ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နည်းပညာ Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
LA MIN said...
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော့် laptop ၀ယ်ထားတာ ၂ ရက်ပဲရှိသေးတယ် အဲဒီ blue screen error တက်နေလို့ သုံးခါစဆိုတော့ ဘာမှ မလုပ်တတ်တာနဲ့ battery ကို ဖြုတ်လိုက်တတ်လိုက်လုပ်ခဲ့မိတယ် နောက်ဆိုရင်သတိထားပါ့မယ်ခင်ဗျာ